Dhageysiga - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'idada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare > Maqalka
Daboolida baahiyaha maqalka
Daboolista maqalka ayaa lagu daray dhammaan qorshayaasha. Xubnuhu waxay u tegi karaan khabiir maqal (khabiir maqal) si loo baaro ogaadaan arrimaha maqalka iyo dheelitirka.
CHPW's MA Dual Plan ayaa sidoo kale leh caymis dheeri ah, oo ay ku jiraan:
$ 0 doollar hal imtixaan maqal oo caadi ah sanadkiiba iyo hal gargaar maqal oo ku habboon/qiimeyn sanadkiiba.
Illaa $ 1,700 ka faa'iideystaan ​​sanad walba qalabka dhegaysiga ee dheeraadka ah iyo sahayda.
Xusuusin: Iyada oo ku xidhan qorshahaaga, waxaa laga yaabaa inaad haysato lacag -bixin ama caymis. Xayiraadaha qaarkood ayaa dhici karta.
Dheefta Maqalka ee Qorshaha Faa'idada Medicare (MA)
2022 MA Qorshayaasha
MA Laba Qorshe (HMO SNP) Baadhitaannada Maqalka Baadhista: $ 0 ama 20% caymis lacageed oo loogu talagalay baaritaannada Medicare daboolay si loo ogaado xaaladaha iyo cudurrada sida dheelitirka ama lumis maqal.
$ 0 hal jadwal imtixaanka maqalka sannadkii iyo hal ku habboonaanta/qiimeynta qalabka maqalka sannadkiiba.
Illaa $ 1,700 xadka dheefta sannad kasta ee loogu talagalay gargaarka maqalka iyo sahayda dheeraadka ah. Waxaad bixinaysaa kharash kasta oo ka sarreeya xadka faa'iidada qorshaha.
Qorshaha MA 1 (HMO) Baadhitaannada Maqalka Baadhista: 20% caymis lacageed oo loogu talagalay baaritaannada Medicare daboolay si loo ogaado xaaladaha iyo cudurrada sida dheelitirka ama lumis maqal.
Baaritaannada maqalka ee joogtada ah iyo qalabka gargaarka maqalka lama daboolayo.
Qorshaha MA 3 (HMO) Baadhitaannada Maqalka Baadhista: $ 20 lacag-bixin ah oo loogu talagalay baaritaannada Medicare daboolay si loo ogaado xaaladaha iyo cudurrada sida dheelitirka ama lumis maqal.
MA Qorshaha Rx (HMO)
Faa'iidooyinka Maqalka ee Qorshaha
Qorshaha MA 1 (HMO) Imtixaanka Maqalka Joogtada ah: Lama daboolin. Imtixaannada maqalka ee joogtada ah, qalabka gargaarka maqalka, iyo qalabka gargaarka maqalka ayaan hoos imaan Medicare.
Imtixaanka Dhageysiga Gaarka ah si loo ogaado xaaladaha iyo cudurada sida dheelitirka ama maqal la'aanta: 20% lacagta caymiska. Waa inuu ku sameeyaa takhtar, maqal-yaqaan, ama bixiye kale oo aqoon u leh goobta bukaan-socodka.
Adeegyada Maqalka (Qalabka gargaarka maqalka, qalabka gargaarka maqalka): Lama daboolin
MA Laba Qorshe (HMO SNP) Imtixaanka Maqalka Joogtada ah: 0% qiimaha. Imtixaanka maqalka waa inuu sameeyaa takhtar maqal oo shati haysta, xaddid hal imtixaan sanadkiiba.
Imtixaanka Dhageysiga Gaarka ah si loo ogaado xaaladaha iyo cudurada sida dheelitirka ama maqal la'aanta: 0% qiimaha.
Adeegyada Maqalka (qalabka gargaarka maqalka, qalabka maqalka): 0% kharashka.
Qalabka Gargaarka Maqalka iyo Qalabka Maqalka: $ 1,700 faa'iidada ugu badan sanad kasta. Saamiga kharashku waa wax kasta oo ka badan faa'iidada ugu badan